၏သင်္ကေတအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ် Is အမေရိကန်ကြက်ခြေနီ နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီခရစ်ယာန်တစ်ဦးသင်္ကေတများနှင့်ဇာတ်ကောင်အတွက်ခရစ်ယာန်သည်ဤအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလဲ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့အစည်းများအစိုးရများနှင့်အသင်းတော်များကနေသီးခြားလောက, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့အစည်းများ, အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြင်ပသင်္ကေတအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သို့မဟုတျ, ဤကိစ္စတွင်၌ရှိသကဲ့သို့, ကယင်း၏မူရင်းခရစ်ယာန်အမှတ်လက္ခဏာတွေထဲကနေဖယ်ရှားခြေလှမ်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာ Matters အမေရိကန်ကြက်ခြေနီက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအဖြူနောက်ခံပေါ်တွင်အနီရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်သင်္ကေတဆွစ်အလံများ၏ပြောင်းပြန်၎င်း၏ကြားနေရေးနှင့်လည်းကြက်ခြေနီ၏တည်ထောင်သူ၏အိမျ, ဟင်နရီ Dunant လူသိများနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်ဟု 2006 ခုနှစ်အစီရင်ခံတင်ပြ ။ ဒါဟာကြားနေရေးနှင့်၎င်းတို့၏ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောမစ်ရှင်ဖေါ်ပြခြင်း, ပဋိပက္ခဒေသများအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့အကာအကွယ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဆွစ်အလံပေါ်တွင်အဖြူလက်ဝါးကပ်တိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးအဆိုအရ "ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏သင်္ကေတ" အဖြစ် 1200 ခုနှစ်တွင်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကြက်ခြေနီလောက, Non-ဂိုဏ်းအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, သူတို့သင်္ကေတချမှတ်ဘို့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အဘယ်သူမျှမမြွက်ခဲ့သည်။
ကြက်ခြေနီ၏တည်ထောင်သူဟင်နရီ Dunant, ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်အတွက် Calvinist ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးပြင်းလာသူတစ်ဦးဆွစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားများအတွက် Napolean III ကိုအတူတစ်ပရိသတ်ကိုရှာကြံခဲ့ပါတယ်ရှိရာ 1859 ခုနှစ်အတွင်း Solferino, အီတလီအတွက်စစ်မြေပြင်ပေါ် 40,000 ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်အသေခံစစ်သားတွေရှေ့တော်၌, အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကစာအုပ်မှဦးဆောင်နှင့် The အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်သင်္ကေတများနှင့်အမည်ဖြင့်လူအပေါင်းတို့အားအကူအညီပူဇော်မယ်လို့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားအဖွဲ့အစည်းအတွက်မွေးစားခဲ့သည် 1864. အတွက်ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတကာညီလာခံနှင့်ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း။
အမေရိကန်ကြက်ခြေနီဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းအတည်ပြုပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကစည်းရုံးတိုက်တွန်းတဲ့သူ Clara Barton ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမျှ, တကဘုရားကျောင်းဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။
အဆိုပါလခြမ်းနီ 1876-78 ကနေ Russo-တူရကီစစ်ကာလအတွင်းအစားအသုံးပြုခဲ့သည်။ အော်တိုမန်အင်ပါယာတစ်ခုမွတ်စလင်လူမျိုး, သူတို့ကအလယ်ခေတ် Crusaders ၏သင်္ကေတများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်ကွက်။ ဒါဟာ 1929 ခုနှစ်ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းအောက်မှာတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
မီဒီယာ pundit ဘီလ် O'Reilly သူတောင်ကနေကြီးမားတဲ့ခရစ်ယာန်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖယ်ရှားခြင်းဆန့်ကျင်ရန်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသင်္ကေတ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ကြက်ခြေနီအသုံးပြုသောအခါမီဒီယာတူးဖော်ရေးကိစ္စတော်ကိုနှိုးဆော် San Diego မှမှာရှိတဲ့စော်လဒက်။ O'Reilly အနီရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ကြောင်းထင်သူသာလူတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်တစ်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ထက်အနီရောင်လခြမ်းပြသသည်ဆိုပါကစစ်ပွဲဇုန်အတွက်မှားယွင်းတဲ့အရပျ၌ခရစ်ယာန်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်ပစ်မှတ်ထားခံရပေလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသူဘီလ် O'Reilly တူသောခရစ်ယာန်တွေဟာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချင်ပါတယ်တဲ့သူ Non-ခရစ်ယာန်အကြမ်းဖက်သမားများကဲ့သို့တူညီသောအမှားလုပ်နေပါတယ်။
Tom Cruise နဲ့ Katie Holmes '' အချင်းစားပါခဲ့သလား
တက္ကဆက်ပြည်နယ် v ဂျွန်ဆင်: ။ 1989 ခုနှစ်တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်
Beginners များအတွက် Agnosticism - Agnosticism နှင့် Agnostic အကြောင်းအခြေခံအချက်အလက်
ပြည်နယ်အလံ Desecration အပေါ်ဥပဒေများ, မီးရှို့ Defacing နှင့်အလွဲသုံးမှု
Macroevolution vs. Microevolution: အ Difference ကဘာလဲ?
Denotation နှင့် Connotation အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
ဘာသာရေး Humanitarian သည်ဆိုတာဘာလဲ
High School တွင်ယာဉ်မောင်းများအတွက်9ဂရိတ်ကားများ
မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Soutenir '' Conjugate လုပ်နည်း ( 'ပံ့ပိုးဖို့')
10 အရှည်ဆုံးနန်းစံ WWE Tag ကိုရေးအဖွဲ့ချန်ပီယံလိဂ်
ဝါရှင်တန် Irving အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပွဲစဉ် Play ကိုမဟာဗျူဟာ
အဆိုပါ Ins နှင့်ဟော်ကီအတွက်ပန်းတိုင်လေ့စာရင်းအင်းတွက်ချက်၏တနေရာ
ကိတ် Chopin: လတ်ြလပ်ခ၏ရှာရန်ခုနှစ်တွင်
Doodle သင်္ကေတ - Arrows
အဆိုပါ Nutcracker ဘဲလေး၏သမိုင်း
9 မရှိမဖြစ်ရစ်ချတ် Burton, Movies
အဘယ်ကြောင့် Beowulf နှင့်အတူအနှောက်အယှက်?
Lorena Ochoa ပွဲစဉ်အတွက် LPGA Tour အပေါ် Play
ရှားပါးကမ္ဘာမြေ Properties ကို
အဆိုပါ IUPAC နှင့်ဒါဟာဘယ်အရာကိုလုပ်ပါပါသလားဆိုတာဘာလဲ